Thierry Henry Oo Loo Magacaabay Tababare Kooxda Monaco | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Thierry Henry Oo Loo Magacaabay Tababare Kooxda Monaco
Published on October 13, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(13-10-2018) Halyeygii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal ee Thierry Henry ayaa heshiis la gaadhay naadigii uu ciyaaraha kasoo bilaabay ee Monaco oo uu u noqonayo tababare kaddib markii Arbacadii shaqada laga caydhiyey Jeonardo Jardim.
Wararka laga helayo waddanka France, ayaa waxay tibaaxayaan in Henry uu noqonayo beddelka Jardim, hase yeeshee ay sugayso caqabad adag oo ah in kaalinta 18-aad ay Monaco kaga jirto horyaalka Ligue 1, isla markaana aanay arag wax guul ah tan iyo bilowgii horyaalka oo la ciyaaray sagaal kulan.
Henry oo ahaa tababare ku-xigeenka xulka qaranka Belgium ayaa ka tegi doona saaaxiibkii Roberto Martinez, waxaana uu bilaaban doonaa boggiisa cusub ee xirfadda bilowga ah ee tababarenimada, iyadoo toddobaadkii horena ay kasoo xidhan tahay shaqo si adag loola xidhiidhinayey oo ahayd inuu noqonayo tababaraha kooxda Aston Villa oo markii dambe magacaabatay Dean Smith oo gacanyare uu u noqday John Terry.
Thierry Henry ayaa xusuus weyn ku leh Monaco oo ah naadigii uu kusoo shaac baxay oo uu u ciyaaray shan sannadood oo ahayd intii u dhaxaysay 1994-1999, ka hor intii aanu uga wareegin Juventus oo uu uga sii gudbay Arsenal.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyey in heshiis isfaham ah ay gaadheen Monaco iyo Thierry Henry, waxa kaliya ee u hadhsana ay tahay in si rasmi ah loo saxeexo, kooxdana uu ula wareego.
Dhinaca kale, tababaraha xulka qaranka Belgium, Roberto Martinez ayaa isaguna tibaaxay in Thierry Henry uu noqon doono macallin weyn oo ku guuleysan doona xirfaddiisa cusub.